Talking Tom Jetski21.3.5.220 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.3.5.220 လြန္ခဲ့ေသာ3ရက္က
ဂိမ္းမ်ား ပံုမွန္ Talking Tom Jetski 2
Talking Tom Jetski2၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ဖွယ်ပြောစကား Tom နှင့်သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူ jetskis Race ဖို့အဆင်သင့်ရ! သင်သည်သင်၏ပြိုင်ဖက် Race အဖြစ်အပူပိုင်းဒေသကျွန်းများ Explore ။ Dodge အတားအဆီးအပေါငျးတို့ဒင်္ဂါးပြား Collections! သင့်ရဲ့အလွန်ကိုယ်ပိုင် jetski အပေါ်စူပါအစာရှောင်ခြင်း Go နှင့်ပြီးပြည့်စုံသောကမ်းခြေအိမ်တော်ကိုတည်ဆောက်ရမည်။ မင်းဘာစောင့်နေတာလဲ? သွားကြရအောင်! Race FUN IS!
*** Talk Tom JETSKI2၏ Rush ကိုခံစား ***
Angela ပြောစကား Hanks ပြောစကားဘင်ပြီးစကားပြောဂျင်း Talking ပြောစကားတွမ်: - FIVE အခမဲ့ Rider ကနေရွေးချယ်။ မြေတပြင်လုံးဂိုဏ်းကဒီမှာနှင့် Racing ဖို့အဆင်သင့်ပဲ!
- 25 UNIQUE JETSKIS စုစည်းရရှိ: အစာရှောင်ခြင်း 'n' ပြင်းစွာသောအကျား Rider ထံမှအလွပန်းရောင် sparkling, အကြံ့ jetski အထိ! သင့်ရဲ့အလွန်ကိုယ်ပိုင် Choose နှင့်အကောင်းဆုံးမြင်းစီးသူရဲဖြစ်!
- Booster upgrade: အနိုင်ရဘာမှလုပ်ပါလိမ့်မယ်သူကိုဆန့်ကျင်ဆန့်ကျင်ယှဉ်ပြိုင်ရန်အထူးအစိတ်အပိုင်းများနှင့်သင်၏ jetski စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ။
- FIVE လောကလူမျိုး: Angela ရဲ့သဲသောင်ပြင် Resort ကိုဘင်ရဲ့သိပ္ပံဓာတ်ခွဲခန်း, ဂျင်းရဲ့ Sandcastle, Hanks ရဲ့ Surf လာပြီးအတူတူနေနေကြပါတယ်နှင့်တွမ်ရဲ့ရတနာကျွန်းများတွင်ပြိုင်ကားအားဖြင့်အံ့မခန်းမြင်ကွင်းများကိုကြည့်ပါ။
- WIN ရင်ဘတ်: တိုင်းအောင်ပွဲသင်နက်နဲသောအရာပစ္စည်းများနှင့်အတူထုပ်ပိုးနေတဲ့ရင်ဘတ်ရရှိ။ သင်လိုချင်တဲ့ဆုရကြလိမ့်မည်နည်း
- သင့်ကိုယ်ပိုင်အပန်းဖြေ Building: တစ်ဦးချင်းစီဇာတ်ကောင်များအတွက်ထူးခြားသောဇိမ်ခံကမ်းခြေအိမ်တော်ကိုတည်ဆောက်ခြင်းပေါ်တွင်သင်၏ပြိုင်ပွဲပိုက်ဆံသုံးပါ။
- မည်သူမဆို PLAY နိုင်သလား: အဆိုပါရိုးရှင်းသောထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကအားလုံးကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်ဆင့်၏ကစားသမားတစ်ဦး jetski ပြိုင်ကားသမားဖြစ်ခြင်း၏စိတ်လှုပ်ရှားပျော်မွေ့ပေးနိုင်ပါတယ်။
တွမ် Jetski2Talking တစ်ဦးအမှတ်တံဆိပ်အသစ်ကအခမဲ့ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာတွမ် Jetski Talking, အခခြှေဲ hit ပြိုင်ကားဂိမ်းဖို့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်ပါတယ်!
ဒီဂိမ်းကိုသင်နှစ်သက်သော jetski လုပ်ဆောင်ချက်ကပိုပေးသည်, ဒါပေမယ့်ပိုကောင်းတဲ့ဂရပ်ဖစ်, upgrade လုပ်လို့ရပါပြီ jetskis နှင့်တိုင်းအောင်ပွဲနှင့်အတူအနိုင်ရစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဆုလာဘ်အတူ။ ဒါကြောင့်ယခုအခမဲ့ Download ပြုလုပ်!
သင့် JETSKI AND ပါစေ'S ပြိုင်ပွဲအတွက် Jump!
- Outfit7 ရဲ့ထုတ်ကုန်များ၏မြှင့်တင်ရေးနှင့် Third-party ကြော်ငြာ
- တခြား apps များနှင့် Outfit7 ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုလင့်ထားသောတိုက်ရိုက်အသုံးပြုသူများသည်
- နောက်တဖန် app ကိုကစားရန်အသုံးပြုသူများအားသွေးဆောင်ဖို့အကြောင်းအရာ Personalisation စာ
- In-app ကိုဝယ်ယူမှုစေရန်အဆိုပါ option ကို
- ပစ္စည်းများကစားသမားအားဖြင့်ရောက်ရှိခဲ့သည်လက်ရှိအဆင့်ကိုပေါ် မူတည်. ကို virtual ငွေကြေးကိုအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောစျေးနှုန်းများများအတွက်ရရှိနိုင်ပါ
- အစစ်အမှန်ပိုက်ဆံသုံးပြီးမည်သည့် In-app ကိုဝယ်ယူအောင်မပါဘဲ app ကိုအပေါငျးတို့သလုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုဝင်ရောက်ဖို့အခြားရွေးချယ်စရာရွေးစရာများ (အဆငျ့တိုးတက်မှု, ဂိမ်းများ, In-ဂိမ်းရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို, ကြော်ငြာများ)
Talking Tom Jetski2အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Talking Tom Jetski2အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Talking Tom Jetski2အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Talking Tom Jetski2အား အခ်က္ျပပါ
googleplayapk စတိုး 131 47.91k
Talking Tom Jetski2ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Talking Tom Jetski2အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.3.5.220
Talking Tom Jetski2APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ